मलाई ‘मान्छेले के भन्लान् ? – Life Nepali
मलाई ‘मान्छेले के भन्लान् ?
जब म ठूला ‘सुपर मार्केट’ मा जान्छु तब लाग्छ– ‘ओहो ! मेरो जीवनमा कति धेरै मालसामान नचाहिने रहेछ, यी वस्तु नकिनेपछि मेरो पैसा बच्छ।’ त्यहाँ बेचिने १० प्रतिशत मालसामान मात्रै मेरा लागि उपयोगी हुने रहेछन्। केही वर्षअघि तराईबाट म एयरपोर्टमा आउँदा हातमा सानो झोला मात्रै थियो। ट्याक्सीमा जाँदा धेरै पैसा पर्ने भएकाले आधा घण्टा नै हो, ३० रुपैयाँमै घर पुगिन्छ भनेर बस चढें।
घरनजिकको चोकमा आइसकेपछि ओर्लेर अर्को बस चढ्न खोज्दा त बसको हिलो लुगामा लाग्यो। अलिकता त पानीले पखालेर बसमा चढेें। घर आएपछि ४ सय मिटर हिँड्नुपर्ने थियो, बाटोमा एक परिचितले सोधे– ‘कसरी लुगामा हिलो लाग्यो ?’ ‘बसमा चढ्दा’ भनें। मेरो उत्तर सुनेर उनले भने– ‘किन माइक्रोबसमा चढेको त ? आफ्नो ‘स्टाटस’ को त ख्याल राख्नुपर्छ !’ उनको तर्कले म छक्क परें। माइक्रोबस, बस चढ्दा मेरो स्टाटस खत्तम हुने हो र भन्ने विचार मनमा आयो तर केही बोलिनँ।
Previous श्रीमान श्रीमतीले कहिल्यै अरुसँग यी ५ कुरा नभनुहोस।
Next प्रिय मान्छेले बि’रामीको हात छुँदा मात्र पनि दु’खाइ आधा कम हुन !